Ama-Phonesites: Dala Amawebhusayithi Efaneli Yokuthengisa kanye Namakhasi Okungena Ngamaminithi Usebenzisa Ucingo Lwakho | Martech Zone
Lokhu kungase kubathukuthelise abanye abantu embonini yami, kodwa izinkampani eziningi zimane nje azinayo imodeli esekela ukutshalwa kwezimali kuhlelo olukhulu lokuthunyelwa kwesayithi kanye nesu lokumaketha okuqukethwe. Ngazi amabhizinisi amancane ambalwa asangena indlu ngendlu noma ancike emazwini omlomo ukuze asekele ibhizinisi elihlaba umxhwele.
Ama-Phonesites: Qalisa Amakhasi Ngamaminithi
Ibhizinisi ngalinye kufanele lilinganisele isikhathi somnikazi walo, umzamo, kanye nokutshalwa kwezimali ukuze kukhiqizwe inqubo yokuthengisa esebenza kahle kakhulu ukuletha ibhizinisi elisha. Kwesinye isikhathi, ukutshalwa kwezimali kuwebhusayithi kulula njengokuthatha isizinda nokubeka ikhasi lokubikezela elihlanzekile, elilula, eliphendula iselula, nelilungiselelwe kahle. Yilokho kanye Ama-phonesites ngeye...
Khetha isifanekiso noma uqale kusukela ekuqaleni. Izifanekiso ezenziwe ngaphambilini zifakwa ngokuchofoza oku-2.
Qala ukwakha amakhasi ngokungeza umbhalo, izithombe, nevidiyo ngesihleli sazo sokudonsa nokuwisa.
Faka uphawu kusayithi usebenzisa isizinda sakho ngokwezifiso futhi uhlanganise noma yiziphi izinkundla zezinkampani zangaphandle ozisebenzisayo.
Misa izimpendulo ezizenzakalelayo nge-imeyili noma nge-SMS yokulandelela.
Khulisa ukufinyelela kwakho ngokukhangisa kanye nekhophi eshayelwa yi-AI.
Ama-Phonesites ahlanganisa izifanekiso eziqinile, ukuqoqwa kwedatha, nokuqukethwe okushayelwa yi-AI ukuze kusizwe amabhizinisi noma ama-ejensi akhiphe amasayithi aguqulela kakhulu amafaneli ngemizuzu.
Ama-phonesites isize amabhizinisi angaphezu kuka-10,000 ukuthi akhiqize imikhondo engaphezu kwesigidi esi-1 futhi aguqule lawo abe izigidi zemali engenayo. I-Phonesites iyiwebhusayithi engenabuhlungu & nomakhi wekhasi lokufika ozokwenza ukuthi ukhiqize imikhondo eminingi, amakhasimende amaningi, nokuthengisa okwengeziwe. Ama-Phonesites anika amandla amabhizinisi amancane nama-ejensi:
Yethula Amakhasi ngemizuzu kunoma iyiphi idivayisi. Umakhi wewebhusayithi wabo uhlanganisa izifanekiso ezakhelwe ngaphambilini, eziguqulela phezulu ongazisebenzisa ukuze wakhe isayithi lakho ngemizuzu nje.
Qoqa Ukuhola kanye nokuqokwa kwezincwadi. Yakha amakhasi alula aqondisa izivakashi kunqubo yakho yokuthengisa isinyathelo ngesinyathelo ngenkathi uqoqa idatha endleleni ukuze ukwazi ukulandelela.
Dala okuqukethwe - Ungakwazi ukukhiqiza ikhophi yokuthengisa eguqukayo kakhulu ngokuchofoza okumbalwa nje ngoMlobi we-AI we-Phonesite.
Ukulandelela I-imeyili - Asikho isidingo sohlelo lwe-imeyili, i-Phonesites uhlelo lwe-imeyili olwakhelwe ngaphakathi lukuvumela ukuthi uthumele ukulandelelwa ngokuzenzakalelayo.
Thola Usizo - Thinta Ithimba Lochwepheshe ukuze usize ngezingcingo zamasu ezi-1-on-1, ingxoxo ebukhoma, umphakathi ozimele, nezinkundla zokucobelelana ngolwazi zamasonto onke.
Noma yiluphi uhlelo lokuphatha okuqukethwe (CMS) requires integration capabilities to enhance and add-on features and functionality. Phonesites is no different, with productized integrations to Zapier, I-Mailchimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, and more.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Samafoni
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Ama-phonesites futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuhambisana kulesi sihloko.
Tags: ikhalendahudula bese uphonsa umhleliizikhangiso ze-facebookamafomuI-google analyticsI-Google ReCaptchahotjarumakhi wewebhu wekhasi lokufikaamakhasi okufikaiqoqo eliholayoi-mailchimpamasayithi efoniifomu lokuthengisaumakhi wefenisha yokuthengisaizingosi ze-funnel zokuthengisaI-StripeI-TwiliovimeoIwebhusayithi Builderyoutubezapper